ဂငျြး နကျ အ စှမျး (မွနျမာ အချေါ နနှငျး နကျ) အ စှမျး အံ့ မခမျး – Askstyle
ဂငျြး နကျ အ စှမျး (မွနျမာ အချေါ နနှငျး နကျ) အ စှမျး အံ့ မခမျး
ဂျင်း နက် အ စွမ်း (မြန်မာအခေါ် နနွင်းနက်)ဂျင်းနက် (တိုင်းရင်းဆေးကောင်းကြီး)
အင်္ဂလိပ်အမည် Black Ginger
ထိုင်းအမည် Kra chai Dum (ထိုင်းဂျင်ဆင်း)
သိပ္ပံအမည် Kaempferia parviflora Wall. ex Baker.
Stahlianthus rubromarginatus S.Q.Tong
မျိုးရင်း Zingiberaceae (ဂျင်းမျိုးရင်း)
ပေါက်ရောက်ရာဒေသ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၊ မြန်မာ၊ ထိုင်း၊ ကမ္ဘောဒီးယား။
ပုံပန်းသဏ္ဍန် ပင်စည်မရှိသော သစ်မြစ်သစ်ဖု ဆေးဖက်ဝင်အပင်ဖြစ်ပြီး ၈လက်မ ၀န်းကျင်အမြင့်ရှိပါတယ်။
အမြစ်ဥက သေးငယ်ပြီး ပြာနက်သော အဆင်းရှိပါတယ်။ အရွက်က ရွက်ထီးဖြစ်ပြီး ၃လက်မမှ ၆လက်မ ၀န်းကျင်ရှည်ပြီး ၂လက်မမှ ၄လက်မ၀န်းကျင် ကျယ်ပါတယ်။
ဘဲဥပုံသဏ္ဍန် အရွက်ဖြစ်ပြီး အနည်းငယ် ခေါက်ချိုးညီမှုမရှိပါ။ အပွင့်အနည်းငယ်သာ ပွင့်ပြီး အဖြူအလယ်မှာ ခရမ်းပြာရောင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။
မြန်မာပြည်မှာ ဆနွင်းနက်၊ နနွင်းနက်အဖြစ် လူအများစုက အမှတ်မှားတတ်ကြပါတယ်။ တကယ်က ဂျင်းနက်၊ ဆနွင်းနက်၊ ဆနွင်းပြာ၊
ဂမုန်းတိမ်ပြာ စတဲ့ အမည်တွေဟာ ပတ်ချာလည် ရှုပ်ထွေးနေတဲ့ ပညာရှင်တို့သာ ခွဲခြား ဆန်းစစ်နိုင်တဲ့ မျိုးစိတ်တွေပါပဲ။
အခုတော့ကျနော့်အနေနဲ့ Google ရဲ့ ကျေးဇူး၊ သင်ဆရာ၊ မြင်ဆရာ၊ ကြားဆရာတွေရဲ့ ကျေးဇူးနဲ့ ဂျင်းနက်တမျိုးတည်းရဲ့
အကြောင်းကိုသာ အသေးစိတ်လေ့လာမိသလောက် ရေးသားဖော်ပြသွားမှာပါ။
ထိုင်းနိုင်ငံမှာ နှစ်ထောင်ချီကာ နန်းတွင်းသုံး ဂျင်းဆင်းအဖြစ် ပီယဆေးကောင်းသဖွယ် တိုးတိုးတိတ်တိတ် သုံးစွဲလာခဲ့တာ ကြာမြင့်ပြီဖြစ်ပါတယ်။
အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ သိပ္ပံနည်းကျ စမ်းသပ်မှုပေါင်း များစွာပြုလုပ်ပြီးဖြစ်လို့ ယောက်ျားတို့ရဲ့ ပီယဆေးကြီးအပြင်၊ ကိုယ်တွင်းကိုယ်ပ ပြည်တည်နာ၊အပူလောင်နာ၊ အဖုအကျိတ်အနာ၊ အစာအိမ်နာတွေသာမက နှလုံးအားကောင်းဆေး၊ အဆစ်အမြစ် လေးဘက်နာ၊ ကိုယ်လက်ထုံကျဉ် မသသန်မစွမ်း၊လေဖြတ်လေငန်းရောဂါတွေပါ ကုသနိုင်တဲ့ဆေးကောင်းကြီးအဖြစ် ယုံယုံကြည်ကြည်သုံးစွဲနိုင်ကြောင်းကို အထပ်ထပ် စမ်းသပ်ပြီးသောသိပ္ပံစမ်းသပ်မှုများများမှ သိရှိလေ့လာမိပါတယ်။
ဒါပေမယ့် တန်ဆေးလွန်ဘေးဆိုတဲ့အတိုင်း တရက်ကို ၁.၃၅ ဂရမ် (လက်ဖက်စားဇွန်းတဇွန်း) ထက် မပိုသောနှုန်းထားဖြင့်သာစားသုံးသင့်ပြီး ပုံမှန် စားသုံးပါက အထက်ဖော်ပြပါ ရောဂါများပျောက်ကင်းသက်သာစေကြောင်းကိုသိပ္ပံစမ်းသပ်မှုများအပြင် နီးစပ်ရာ မိတ်ဆွေများမှ လက်တို့ ပြောကြားချက်များရောမိမိကိုယ်တိုင် ပျားရည်ဖြင့် တေပြီး စားသုံးရာမှရော သိရှိကြုံတွေ့သည်များကို ဖောက်သည်ချ အသိပေးဖော်ပြလိုက်ရပါတယ်။
ဂျင်းနက်မှာ ဘိုင်အိုဖလက်ဗနွိုက်ဆိုတဲ့ ဗီတာမင် ပီလို့ ခေါ်တဲ့ အ၀ါရောင်၊ အပြာရောင် ရောင်ခြယ်စု တမျိုးပါဝင်ပြီး၊
အင်းဆက်၊ မှို၊ အဏုဇီဝဖျက်ပိုးတွေကို ကာကွယ်တဲ့ အာနိသင်ရှိပါတယ်။ ကင်ဆာရောဂါကိုလဲ တိုက်ဖျက်နိုင်စွမ်း အာနိသင်ရှိတယ်လို့လဲ ဆိုပါတယ်။
ပါဝင်မှု ဓာတ်ပေါင်းများနှင့် အချိုးများ
The three ‘main’ methoxyflavonoids
ပါဝင်တဲ့ ဓာတ်ပေါင်းတွေကို ကြွက်တွေကို စမ်းသပ်အဖြေရှာကြည့်ရာ၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားလာခြင်း၊
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဟော်မုန်းပမာဏ များလာခြင်း၊ နှလုံးသွေးကြောအားကောင်းစေခြင်း၊ ကြွက်တို့ရဲ့ ကိုယ်တွင်း ကိုယ်ပ အနာရောဂါများ အပူလောင်နာများ သက်သာစေခြင်း၊
၀ိတ်ကျအဆီလျော့စေခြင်း၊ ဓာတ်မတည့်မှု အဆိပ်သင့်မှု သက်သာစေခြင်း၊ အသည်း၊ ကျောက်ကပ်၊ အဆုတ်တို့ရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်စေခြင်း၊
စတဲ့ အကျိုးရလဒ်ကောင်းတွေကို စမ်းသပ်အဖြေရှာမိပြီး ယိုးဒယားတို့ရဲ့ တိုင်းရင်းဆေးကောင်းအဖြစ် နှစ်ထောင်ချီ သုံးစွဲလာခဲ့ပုံကို ဆင်ခြင်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
သိပ္ပံစမ်းသပ်ချက်အရ တရက် လက်ဖက်စားဇွန်းတဇွန်းထက် လုံးဝ ပိုမစားမိဖို့ အထူးသတိပေးလိုပါတယ်။
ဂျင်းနက်​ အမှုန့်​၃ ​ရွေး- နှမ်းဆီလက်​ဖက်​စားဇွန်း ၁ ဇွန်း​ရော ပြီး
တုတ်​​ကွေး​ရောဂါ​တွေ (လက်ရှိ H1N1 H5N1)
ပျားရည်​ ၁ဇွန်း နနွင်းနက်​အရည်​ ဇွန်းတဝက်​​ရောပြီး
ည ၈နာရီ (အိပ်ခါနီး) ဝန်းကျင်​ပုံမှန်​
​သောက်​​ပေးပါ ကြိုတင်​ကာကွယ်​​ဆေးအဖြစ်​လဲ ​သောက်​လို့ရပါတယ်။
မျက်​နှာပြင်​ရှိ တင်းတိပ်​ မှဲ့​ခြောက်​များ
သံပုရာရည်​ အစက်​ ၅ စက်​ခန့်​
Credit: Facebook​ and internet sources
ဂငျြး နကျ အ စှမျး (မွနျမာအချေါ နနှငျးနကျ)ဂငျြးနကျ (တိုငျးရငျးဆေးကောငျးကွီး)
အင်ျဂလိပျအမညျ Black Ginger
ထိုငျးအမညျ Kra chai Dum (ထိုငျးဂငျြဆငျး)
သိပ်ပံအမညျ Kaempferia parviflora Wall. ex Baker.
မြိုးရငျး Zingiberaceae (ဂငျြးမြိုးရငျး)
ပေါကျရောကျရာဒသေ ဘင်ျဂလားဒရှေျ့၊ မွနျမာ၊ ထိုငျး၊ ကမ်ဘောဒီးယား။
ပုံပနျးသဏ်ဍနျ ပငျစညျမရှိသော သဈမွဈသဈဖု ဆေးဖကျဝငျအပငျဖွဈပွီး ၈လကျမ ဝနျးကငျြအမွငျ့ရှိပါတယျ။
အမွဈဥက သေးငယျပွီး ပွာနကျသော အဆငျးရှိပါတယျ။ အရှကျက ရှကျထီးဖွဈပွီး ၃လကျမမှ ၆လကျမ ဝနျးကငျြရှညျပွီး ၂လကျမမှ ၄လကျမဝနျးကငျြ ကယျြပါတယျ။
ဘဲဥပုံသဏ်ဍနျ အရှကျဖွဈပွီး အနညျးငယျ ခေါကျခြိုးညီမှုမရှိပါ။ အပှငျ့အနညျးငယျသာ ပှငျ့ပွီး အဖွူအလယျမှာ ခရမျးပွာရောငျတှနေို့ငျပါတယျ။
မွနျမာပွညျမှာ ဆနှငျးနကျ၊ နနှငျးနကျအဖွဈ လူအမြားစုက အမှတျမှားတတျကွပါတယျ။ တကယျက ဂငျြးနကျ၊ ဆနှငျးနကျ၊ ဆနှငျးပွာ၊
ဂမုနျးတိမျပွာ စတဲ့ အမညျတှဟော ပတျခြာလညျ ရှုပျထှေးနတေဲ့ ပညာရှငျတို့သာ ခှဲခွား ဆနျးစဈနိုငျတဲ့ မြိုးစိတျတှပေါပဲ။
အခုတော့ကနြေျာ့အနနေဲ့ Google ရဲ့ ကြေးဇူး၊ သငျဆရာ၊ မွငျဆရာ၊ ကွားဆရာတှရေဲ့ ကြေးဇူးနဲ့ ဂငျြးနကျတမြိုးတညျးရဲ့
အကွောငျးကိုသာ အသေးစိတျလလေ့ာမိသလောကျ ရေးသားဖျောပွသှားမှာပါ။
ထိုငျးနိုငျငံမှာ နှဈထောငျခြီကာ နနျးတှငျးသုံး ဂငျြးဆငျးအဖွဈ ပီယဆေးကောငျးသဖှယျ တိုးတိုးတိတျတိတျ သုံးစှဲလာခဲ့တာ ကွာမွငျ့ပွီဖွဈပါတယျ။
အခုနောကျပိုငျးမှာတော့ သိပ်ပံနညျးကြ စမျးသပျမှုပေါငျး မြားစှာပွုလုပျပွီးဖွဈလို့ ယောကျြားတို့ရဲ့ ပီယဆေးကွီးအပွငျ၊ ကိုယျတှငျးကိုယျပ ပွညျတညျနာ၊အပူလောငျနာ၊ အဖုအကြိတျအနာ၊ အစာအိမျနာတှသောမက နှလုံးအားကောငျးဆေး၊ အဆဈအမွဈ လေးဘကျနာ၊ ကိုယျလကျထုံကဉျြ မသသနျမစှမျး၊လဖွေတျလငေနျးရောဂါတှပေါ ကုသနိုငျတဲ့ဆေးကောငျးကွီးအဖွဈ ယုံယုံကွညျကွညျသုံးစှဲနိုငျကွောငျးကို အထပျထပျ စမျးသပျပွီးသောသိပ်ပံစမျးသပျမှုမြားမြားမှ သိရှိလလေ့ာမိပါတယျ။
ဒါပမေယျ့ တနျဆေးလှနျဘေးဆိုတဲ့အတိုငျး တရကျကို ၁.၃၅ ဂရမျ (လကျဖကျစားဇှနျးတဇှနျး) ထကျ မပိုသောနှုနျးထားဖွငျ့သာစားသုံးသငျ့ပွီး ပုံမှနျ စားသုံးပါက အထကျဖျောပွပါ ရောဂါမြားပြောကျကငျးသကျသာစကွေောငျးကိုသိပ်ပံစမျးသပျမှုမြားအပွငျ နီးစပျရာ မိတျဆှမြေားမှ လကျတို့ ပွောကွားခကျြမြားရောမိမိကိုယျတိုငျ ပြားရညျဖွငျ့ တပွေီး စားသုံးရာမှရော သိရှိကွုံတှသေ့ညျမြားကို ဖောကျသညျခြ အသိပေးဖျောပွလိုကျရပါတယျ။
ဂငျြးနကျမှာ ဘိုငျအိုဖလကျဗနှိုကျဆိုတဲ့ ဗီတာမငျ ပီလို့ ချေါတဲ့ အဝါရောငျ၊ အပွာရောငျ ရောငျခွယျစု တမြိုးပါဝငျပွီး၊
အငျးဆကျ၊ မှို၊ အဏုဇီဝဖကျြပိုးတှကေို ကာကှယျတဲ့ အာနိသငျရှိပါတယျ။ ကငျဆာရောဂါကိုလဲ တိုကျဖကျြနိုငျစှမျး အာနိသငျရှိတယျလို့လဲ ဆိုပါတယျ။
ပါဝငျမှု ဓာတျပေါငျးမြားနှငျ့ အခြိုးမြား
ပါဝငျတဲ့ ဓာတျပေါငျးတှကေို ကွှကျတှကေို စမျးသပျအဖွရှောကွညျ့ရာ၊ လိငျပိုငျးဆိုငျရာ စှမျးဆောငျရညျမွငျ့မားလာခွငျး၊
လိငျပိုငျးဆိုငျရာ ဟျောမုနျးပမာဏ မြားလာခွငျး၊ နှလုံးသှေးကွောအားကောငျးစခွေငျး၊ ကွှကျတို့ရဲ့ ကိုယျတှငျး ကိုယျပ အနာရောဂါမြား အပူလောငျနာမြား သကျသာစခွေငျး၊
ဝိတျကအြဆီလြော့စခွေငျး၊ ဓာတျမတညျ့မှု အဆိပျသငျ့မှု သကျသာစခွေငျး၊ အသညျး၊ ကြောကျကပျ၊ အဆုတျတို့ရဲ့ စှမျးဆောငျရညျ မွှငျ့တငျစခွေငျး၊
စတဲ့ အကြိုးရလဒျကောငျးတှကေို စမျးသပျအဖွရှောမိပွီး ယိုးဒယားတို့ရဲ့ တိုငျးရငျးဆေးကောငျးအဖွဈ နှဈထောငျခြီ သုံးစှဲလာခဲ့ပုံကို ဆငျခွငျကွညျ့နိုငျပါတယျ။
သိပ်ပံစမျးသပျခကျြအရ တရကျ လကျဖကျစားဇှနျးတဇှနျးထကျ လုံးဝ ပိုမစားမိဖို့ အထူးသတိပေးလိုပါတယျ။
ဂငျြးနကျ အမှုနျ့၃ ရှေး- နှမျးဆီလကျဖကျစားဇှနျး ၁ ဇှနျးရော ပွီး
တုတျကှေးရောဂါတှေ (လကျရှိ H1N1 H5N1)
ပြားရညျ ၁ဇှနျး နနှငျးနကျအရညျ ဇှနျးတဝကျရောပွီး
ည ၈နာရီ (အိပျခါနီး) ဝနျးကငျြပုံမှနျ
သောကျပေးပါ ကွိုတငျကာကှယျဆေးအဖွဈလဲ သောကျလို့ရပါတယျ။
မကျြနှာပွငျရှိ တငျးတိပျ မှဲ့ခွောကျမြား
သံပုရာရညျ အစကျ ၅ စကျခနျ့
Credit: Facebook and internet sources